News | Liverpool
News | Tag: Liverpool
'लिभरपुलका अलेकजेण्डर आरनोल्डले बेलोन डि’ओर जित्न सक्छन्'
एजेन्सी । पछिल्लो समय लिभरपुलका स्टार खेलाडी ट्रेन्ट अलेकजेण्डर आरनोल्ड निकै चर्चामा रहेका छन् । उनको खेलबाट प्रभावित भएका ब्राजिलियन लिजेण्ड क्याफुले समेत तारिफ गरेका छन् ।
लिभरपुलले साउथह्याम्टनविरुद्ध हान्यो चार गोल, अपराजित यात्रा कायमै
एजेन्सी । यस सिजन २५ खेलमा अपराजित रहेको लिभरपुलले प्रिमियरमा साउथह्याम्पटनलाई ४-० गोलले पराजित गरेको छ । लिभरपुलका लागि खेलको ४७ औं मिनेटमा एलेक्स च्याम्बरलिनले गोल गरे ।
लेस्टरसँग पराजित हुने डरमा लिभरपुल !
एजेन्सी । यस सिजन लिभरपुलले सानदार खेल प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ । गएको सिजन एक अंकलेमात्र प्रिमियर लिग उपाधिबाट पछि परेको लिभरपुल यस सिजन त्यो गल्ती पुनः नदोहोराउने रणनीतिमा रहेको छ ।
'लिभरपुललाई टक्कर दिन अब लगभग असम्भव'
एजेन्सी । म्यानचेस्टर सिटीका प्रशिक्षक पेप ग्वार्डीवालाले यस सिजन लिभरपुललाई भेट्टाउन लगभग असम्भव रहेको बताएका छन् ।
जिदानले हाँस्दै भनेः लिभरपुललाई पाखा लगाउन सक्षम छौँ
एजेन्सी । रियल मड्रिडका प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानले लिभरपुललाई पराजित गर्ने बताएका छन् ।
के अपराजित हुँदै लिभरपुलले यस सिजनको उपाधि जित्ला त ?
एजेन्सी । यस सिजन उच्च फर्ममा रहेको लिभरपुल १४ खेलमा पनि अपराजित रहेको छ । आर्सनल, म्यानचेस्टर सिटी, चेल्सी, टोटनहम, लेस्टर सिटीजस्ता क्लबले पनि लिभरपुललाई रोक्न सकेनन् ।
लिभरपुललाई क्रिस्टल प्यालेसले रोक्न सकेन
काठमाडौँ । गएराति भएको खेलमा लिभरपुलले क्रिष्टल प्यालेसलाई २–१ गोल पराजित गर्न सफल भएको छ ।
टोटनहमले लिभरपुललाई रोक्न सकेन
एजेन्सी । एक गोलको अग्रता बनाएको टोटनहमले लिभरपुललाई रोक्न असफल भएको छ । एनफिल्डमा लिभरपुललाई कडा टक्कर दिएको टोटनहम लिभरपुलसँग २-१ गोलले पराजित भएको हो ।
मैत्रीपूर्ण खेलमा लिभरपुलद्वारा लियोन पराजित
एजेन्सी । प्रि–सिजन अन्तर्गत लिभरपुलले मैत्रीपूर्ण खेलमा लियोनलाई ३–१ गोल अन्तरले पराजित गरेको छ ।
समूह चरणको ३ खेलमा हारेर पनि कसरी लिभरपुलले च्याम्पियन्स लिग जित्यो ?
काठमाडौँ । सिजन २०१८–१९ को युरोपियन फुटबलको च्याम्पियन इंग्लिस क्लब लिभरपुल बनेको छ । शनिबार राति मड्रिडस्थित वान्डा मेट्रोपोलिटानोमा सम्पन्न फाइनल खेलमा अर्को इंग्लिस क्लब टोटनहमलाई २–० गोलले पराजित गर्दै लिभरपुल विजयी बनेको हो । लिभरपुले च्याम्पिन्य लिगमा खेलको १२ खेलमध्ये ७ खेलमा जित १ खेलमा बराबरी तथा ४ खेलमा हार व्यहोरे पनि उपाधि जितेको हो ।